विदेशबाट फर्केको छोरा गुमाउनुको पीडा | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
| मङ्लबार, फाल्गुन ६, २०७६
सम्पादकिय अन्तराष्ट्रिय खबर चलचित्र पर्यटन सूचना/प्रविधि
विदेशबाट फर्केको छोरा गुमाउनुको पीडा
Published On : १८ चैत्र २०७४, आईतवार ०७:४४
एक वर्षअघि २०७३ फागुन २३ गते एमालेको मेची महाकाली अभियान अन्र्तगत सप्तरीमा सम्बोधन गर्ने दिन थियो । सप्तरीकै शान्तिदेवी मेहताका माइला छोरा सञ्जय पनि कार्यक्रममा लागि घरबाट निस्किनुभयो । शान्तिदेवीलाई छोरा कहाँ गयो भन्ने हेक्का थिएन ।
सञ्जय बेलुकी अबेरसम्म घर नफर्किदा उहाँले सोच्नुभयो, ‘विदेशबाट फर्किएको छोरो, भनेको काम पाएको छैन, विरक्तिएर बजार र चोकतिर कतै बसेको होला ।’ बजार र चोकमा भीड थियो । त्यही भीडमा होला भन्ठानेको छोराको मृत्युको खबर त्यै भीडबाट उहाँको कानमा ठोक्कियो । उहाँ छांगाबाट खसै झैँ हुनुभयो ।
विदेशबाट फर्किएको केही समयमै आफ्नै काखमा छोरा गुमाउनु पर्दा शान्तिदेवीको आँखा ओभाएका छैनन् । कमाउने छोराको मृत्यु भएपछि शान्तिदेवी र उहाँका श्रीमान् लक्ष्मणप्रसाद बिचल्लीमा पर्नुभएको छ ।
शान्तिदेवीका व्यथा उहाँकै शब्दमा
सिकाउन पर्ने उमेरको थिएन हाम्रो छोरो । विदेश पनि घुमेर आएको छोरालाई गाउँ सरह घुम्न नजानु भनेर कसरी भन्नु थियो र । पोहोर फागुनमा एमालेले मेचीमहाकाली अभियान चलाएको थियो । त्यही अभियानमा सहभागी हुन छोरो पनि जान्छु भन्यो । गाउँका सबै युवा गएका थिए । मैले छोरालाई रोक्न सकिन ।
दिनभरी छोरो फर्किएन । किन आएन भनेर मन आत्तिएको थियो । छोरो त साँझ पर्दा पनि आएन तर रात पर्नै लाग्दा आएको खबरले भने हाम्रो होसै उड्यो ।
गाउँकै रामचन्द्र यादवले हत्तारिँदै आएर भने, ‘सञ्जय त झडपमा पर्‍यो ।’
अपत्यारिलो थियो उहाँले ल्याएको खबर, कसरी त्यस्तो भयो ? के भयो सञ्जयलाई ? म एकदमै आत्तिएँ ।
रामचन्द्रले थप्नुभयो, ‘हिंसात्मक घट्ना भयो, सञ्जय पनि त्यसमै परेर बित्यो ।’
उहाँको कुरा पत्याउन पनि सकिन । नपत्याउनु पनि कसरी ?
छोरो त्यही सिंसात्मक घटनामा परेर मरेको सत्य सावित भयो । २५ वर्ष मात्रै लागेको थियो । सहारा त्यो छोरा भन्दा अरु थिएनन हामी बुढाबढीको । जेठो छोरो छुट्टै बस्न थालिसकेको थियो । कान्छो सानै थियो । छोरा मरेको खबर सुन्दा हामी नै किन मरेनौं भन्ने लाग्यो । सन्तान शोक कोही आमाबुवाले नि भोग्न नपरोस् ।
विदेशबाट फर्किएको ६ महिना पनि भएको थिएन । कमाएर भाइ पढाउछु, तपाईंहरुलाई नि राम्रोसँग पाल्छु भन्थ्यो, खै के भयो यसै फर्कियो । बरु विदेशमै भएको भए त्यसरी त मर्ने थिएन होला जस्तो लाग्छ । उ त मरेर गैहाल्यो । नेताहरुले के पाए थाहा छैन् । अहिले त एमालेकै नेता प्रधानमन्त्री भएका छन् रे ।
उहाँहरुको सफलताका लागि मेरो छोराको पनि ज्यान गएको छ । उहाँहरुकै कार्यक्रममा छोरा म¥यो । कार्यक्रम सक्नुभयो जानुभयो । तर हामी त छोरो मरेपछि टुहुरो भएका छौँ ।
बिहान बेलुकाको पेट भर्ने उही त थियो । कमाउने नै नभएपछि हामीलाई कसले पाल्ला । घरव्यवहार थेग्ने छोराकै मृत्यु भयो । कान्छो छोरो पढ्दै छ । उसलाई पढाउन पनि धौ–धौ भयो ।उज्यालो अनलाईनबाट लिइएको खबर
उसको पढाई खर्चका लागि तीन कठ्ठा जग्गा पनि बेचिसकेँ । अब दुई कठ्ठा मात्रै बाँकी छ । यो बाहेक अरु कुनै जेथो छैन । न त कुनै आम्दानीको स्रोत ।
मणिकामदेवी माविलाई २० थान कम्यूटर हस्तान्तरण
पोखराको कर्मा फ्लाइट र ए टु टेक नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले गोरखाको दुर्गम गाउँ लाप्राकको
कृष्णज्योति माविको बार्षिकोत्सवमा सहयोगदातालाई सम्मान
सिरानचोक गाउँपालिका ६ महटारको कृष्णज्योति माविको तीनदिने ३७ औं बार्षिकोत्सवको अवसरमा बिभिन्न कार्यक्रमहरु भएका छन्
थापा परिबारद्वारा दुईलाखको अक्षयकोष स्थापना
शहीद लखन गाउँपालिका ८ स्थायी ठेगाना भई हाल गोरखा नगरपालिका लक्ष्मीबजारमा बस्दै आएका भरत थापाले
विप्लव समूहका दुई जना छुटे
दरौँदी समाचारदाताः विप्लव समूहको गतिबिधिमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका दुईजना रिहा भएका छन् ।
पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घट्यो
महरा छुटेपछि रोशनीको प्रतिक्रिया : उहाँ निर्दोष हुनुहुन्थ्यो
सम्पादक: शिव उप्रेती
अध्यक्ष : भाइचन्द्र श्रेष्ठ
फोन : ०६४४२१५१०